अर्थतन्त्र Archives - Page6of 21 - Vishwa News
काठमाडौं । भूकम्पले भत्काएका मध्ये ६२ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार २४ प्रतिशत घर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । संघीय संसद, विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख
६ मंसिर २०७६, शुक्रबार विस्तृतमा »
काठमाडौं । नेपालले विद्युतको पहुँच र गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालले छोटो सयममा यस क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरेको हो । विश्‍व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार प्रति १ सय घरधुरीमध्ये
निजी सवारीले भाडामा मान्छे बोक्न नपाउने, निसानामा टूटल र पठाओ
काठमाडौं । सरकारले निजी सवारी साधनका रुपमा दर्ता भएका सवारी साधनले भाडामा यात्रु बोक्ने नपाउने भन्दै त्यसो गरेको पाइए कारवाहीको चेतावनी दिएको छ । यातायात व्यवस्थ विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सवारी
४ मंसिर २०७६, बुधबार विस्तृतमा »
काठमाडौं । करीव २० लाख मूल्य बराबरको डिजेल बोकेर बाराको अम्लखेगन्जबाट विराटनगर आइरहेको ट्यांकर अपहरण भएको छ । आइतबार रातको १ बजे सिराहा, लहानस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको हुलाक कार्यालय अगाडिबाट ट्यांकर अपहरणमा परेको हो । ना ४ ख ४१६३ नम्बरको ट्यांकर
३ मंसिर २०७६, मंगलवार विस्तृतमा »
सिद्धबाबामा सुरुङ बन्ने पक्का, अर्थले दियो स्रोत सुनिश्चितता
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले बहुवर्षिय ठेक्कामा लगाएर सुरुङ निर्माण गर्न सहमति दिएसँगै अब सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग बन्ने पक्का भएको छ । बुटवल, तानसेन सडकखण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा पहिलोका कारण वर्षेनी धेरै मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यस क्षेत्रको पहिरो
माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आजबाट औपचारिक संचालन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयस्थित एक्सन रुमबाट पहिलो पटक आयोजनाको उद्घाटन गर्दैछन् । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजनाको पहिलो पटक एक्सन रुमबाट उद्घाटन गर्न लागिएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैले निर्माण गरेको सो आयोजना एक दशकको
२ मंसिर २०७६, सोमबार विस्तृतमा »
बढी कर तिर्ने १५ करदाता सम्मानित
काठमाडौं । सरकारले वर्षभर सबैभन्दा बढी कर तिर्ने १५ करदातालाई सम्मान गरेको छ । आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उनीहरुलाई सम्मान गरेका हुन् । १ मंसिरमा हरेक वर्ष कर दिवसको अवसर पारी बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान
१ मंसिर २०७६, आईतवार विस्तृतमा »
काठमाडौं । विज्ञ अर्थमन्त्रीसहितको दुई तिहाईको सरकार गठन भएको करीव दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । यसबीचमा सार्वजनिक खर्च त्यसमा पनि पूँजिगत खर्चमा निकै सुधार हुने अपेक्षा आमसर्वसाधारणले गरेका थिए । तर, सरकारले आफूलाई त्यसमा अब्बल सावित गर्न सकेन् । चालु
काठमाडौं । सरकारले ललितपुरको खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि प्रयास थालेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अन्तिमतर्फ पुग्दा अब काठमाडौं उपत्यकामा मकवानपुरजिल्लास्थित सिस्नेरी खोलाबाट खानेपानी आपुर्ति गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन हुने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले यसको
३० कार्तिक २०७६, शनिबार विस्तृतमा »
काठमाडौं । ठगिको आरोपमा पक्राउ परेका उद्योगी रुप ज्योती रिहा भएका छन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गमा राखिएका उनलाई प्रहरीले रिहा गरेको हो । उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निष्कर्षमा पुग्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले शुक्रबार हाजिर जमानतमा छाडिदिन प्रहरीलाई पत्र
२९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार विस्तृतमा »
सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको प्रारम्भिक अनुमान संशोधन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६\_७७ को बजेटमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएको थियो । यसलाई तीन महिनामै संशोधन गर्नु परेको छ । सरकारले अनुमान गरेअनुसार आर्थिक गतिविधिले गति नलिएपछि आर्थिक वृद्धिको
२८ कार्तिक २०७६, बिहीबार विस्तृतमा »
फेरिएको विजुली यूग
विराटनगर । कुनै समय अधिक लोडसेडिङका कारण हिउँद महिना लाग्नासाथ धेरै विजुली खपत नगर्न आग्रह गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण अब भने विद्युत खपत बढाउन आग्रह गर्न थालेको छ । यसले नेपालको कालो विगतलाई बिर्साउने गरी नेपाल अगाडी बढेको देखिन्छ ।
काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन थाल्ने भएका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा राखिएका कतिपय प्रावधानको विरोधमा निर्माण व्यवसायीले असन्तुटी जनाउँदै आएका छन् । डेढ महिनामा तीनपटकसम्म संशोधन भएपनि व्यवसायीको माग पुरा नभएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन नेपाल निर्माण व्यवसायी
निर्यात बढाउन कार्ययोजना बन्ने
काठमाडौं । दीगो निर्यात वृद्धि गर्न आवश्यक नीति तथा व्यवहारिक विषयवस्तु समेटेर कार्ययोजना बन्ने भएको छ । सरकार यसको तयारीमा जुटिसकेको अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त जानकारी गराएका हुन् । अर्थ मन्त्री खतिवडाका अनुसार सोही सिलसिलामा अर्थ मन्त्रालयले केही
२७ कार्तिक २०७६, बुधबार विस्तृतमा »
काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट नेपाल आउँदा यात्रुले बोक्न पाउने परिमाणको सुनमा लाग्दै आएको महशुल बढाएको छ । व्यवसायिक प्रयोजनमा भित्रने सुनसँगै आम व्यक्तिले बोकेर ल्याउन पाउने सुनमा समेत अब भन्सार बढेको छ । यात्रुले साविकमा भन्दा अब प्रतितोला कम्तिमा १५
२६ कार्तिक २०७६, मंगलवार विस्तृतमा »